DRC: အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ62019 အပေါ်ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏သုံးသပ်မှု - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: အင်္ဂါနေ့သြဂုတ်လ62019 အပေါ်ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏သုံးသပ်မှု - အာဖရိက
Tele RELAY တစ်ခု6သြဂုတ်လ 2019
- နိုင်ငံရေးပါတီဌာနချုပ်အတွက်အစိုးရ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းမီအဖျားကျယ်ကျယ်ကင်ရှာဆာယနေ့ထုတ်ဝေသောသတင်းစာများအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေပါတယ်။ သည်အခြားခေါင်းစဉ်တွေထဲမှာအီဘိုလာရောဂါဆန့်ကျင်တုန့်ပြန်ဆွေးနွေးကြသည်။
"ဟုအဆိုပါ cache ကိုဝေသော 23 ရာထူး။ " အလားအလာပူဇျောသက်ကာဒီခေါင်းစဉ်ကို "လာမယ့်အစိုးရအတွက်ပို့စ်များကို FCC နှင့် cache တစ်ဦးဖြန့်ဝေပြီးနောက်အချိန်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ရွေးချယ်ရေးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပလက်ဖောင်းမှာခုံသမာဓိမှယခု" ကွောငျးဖျောပွသ.
တစ်ဦးချင်းစီပါတီသို့မဟုတ်အုပ်စုပွဲခံဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီရန်သူ၏အခြမ်းအပေါ်စောင်ဆွဲထုတ်ဖို့ရှာကြံတဲ့အခါမှာတစ်ဦးကအလွန်အရေးပါအခိုက်, ဒီသတင်းစာအရသိရသည်မှတ်ချက်ချ: အဆိုပါ FCC သည်, ရှိသမျှသည်ယောသပ် Kabila ၏ဘယ်သို့ရွေးချယ်မှုနောက်ကွယ်တွင်တက်တန်းစီရန်မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုရင် "ပြဿနာကိုခွဲဝေမှုလွယ်ကူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေရှိရာ Cache ထဲမှာပေါ်ပေါက်။ အဆိုပါ UDPS နှင့် UNC မှအပေါင်းဟာသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်အကြားပြီးခဲ့သည့်အချိန်ကဲ့သို့သော Kin-Kiey Mulumba နှင့်အခြားသောသည်တယောဝေးသဘောတူရာမှဖြစ်ကြသည်။ "
"အစိုးရ FCC သည် - cache: ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဘို့သာလျှင်ရိုသေလေးစားမှု, ထိုအင်္ဂါတို့တွင်သဟဇာတအာမခံနိုင်" မှတ်ချက်ပြုသူကိုသေးအလားအလာအဖြစ်: "အားလုံးကွန်ဂိုနေဆဲစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့အစိုးရက Ilunga များလွှတ်ပေးရန်စောင့်ဆိုင်းမိမိတို့၏ဒုက္ခကိုစောင့်ရှောက်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မှတ်စု, များစွာသောလေ့လာသူများနှစ်ဖက်စလုံးမှလာရန်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်သဟဇာတ, FCC သည်-Cache အကြောင်းကိုသံသယရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ FCC သည်ဝန်ကြီးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲအမိန့်များ non-အကောင်အထည်ဖော်ရေး, ဒီသံသယအား " သို့ဖြစ်. , ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာခြင်းမှဝန်ကြီးများအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အစိုးရစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်သဟဇာတသေချာစေရန်ဘုံပိုင်းခြေဖြစ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်သောသူအလားအလာဆက်လက် နှစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်အစွန်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ "
ထပ်ကာထပ်ကာအလားအလာ, ဒီသတင်းစာအတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အတွက်၎င်း၏ခေါင်းစဉ်ကမေးတယ်: "အစိုးရ: Bahati Lukwebo သည်ကွန်ဂိုတွင်နိုင်ငံရေးဘဝအသဿအဘို့အဘယ်သို့အခန်းကဏ္ဍ? "။ အဆိုပါ FCC သည်အတွက်မျက်နှာသာ၏, ကျိုးနွံ Bahati ဖြစ်စေရွေ့ခဲ့ပါဘူး။ : ပါလီမန်အများစုအတွက် positioned သူ၏နိုင်ငံရေးအုပ်စု AFDC- တစ်ဦးကလည်းသူကနိဂုံးချုပ်မတိုင်မီရေးသားခဲ့သည်အစိုးရက Ilunga အတွက်ဝေစုချင်နှင့်အတူ "ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Bahati သည်၎င်း၏နောက်ဆုံးစကားလုံးကဆိုပါတယ်မရှိသေးပေ။ အဆိုပါ FCC သည်ဖယ်ထုတ်လိုက်သို့မဟုတ်မ, ယခင်ဝန်ကြီးနိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းပေါ်မှာအခန်းကဏ္ဍမှရည်ရွယ်ပါသည်။ "
ဖိုရမ် DES ဟာ AS နေစဉ်, ခေါင်းစဉ်နဲ့အယ်ဒီတာ့အာဘော်အတွက်: "Highly ကျောရိုးရှိသတ္တဝါဝန်ကြီးများ! ", မှတ်စုများ: "ဒါဟာတစျထောငျမိုင်ကိုနှင်ထုတ်အနံ့။ စစ်မှန်တွင်လည်းဖြန့်ဖြူးဘို့သဘောတူညီချက်ဝန်ကြီးချုပ်ပုံးဖြည့်ဖို့ပါသည်။ မင်္ဂလာဆက်ခံ - - ကပူဇော်သို့မဟုတ်ပါတီများနှင့် / သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းသောအမည်များကိုမှတဆင့် sorting ။ ဒီတစ်ခါလည်းကြှနျုပျတို့သညျ "Yandi ့" ၏ဇာတ်ကားကိုကြည့်မယ့်။ အကောင်းတစ်ဦးစိစစ်၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်အတူ။ ဒါကလက်ပွတ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
နှင့်ဤသတင်းစာရှင်းလင်း: "စင်စစ်, တစ်ပိုင်းပါလီမန်သို့မဟုတ်တစ်ပိုင်းသမ္မတစနစ်, အစိုးရကိုအမျိုးသားညီလာခံတွင်အာဏာချိန်ခွင်လျှာအပေါ်အခြေခံသည်။ အဆိုပါ FCC သည်-Cache အများစုထို့ကြောင့် "အစိုးရအဖွဲ့သည်ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိသည်.
မိမိအဆောင်းပါးintutiléခုနှစ်တွင်: အနီးကပ် "ဝန်ကြီးများ ... : အရည်အချင်းကို၏ပဋိပက္ခသတိပြုပါ! "ဖိုရမ် DES ဟာအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအပေါ်ဘာသာရပ်ပြန်လည်ရောက်ရှိ။
သူကသတိပေး: "ဒီအန္တရာယ်ကိုယ်စားလှယ်ပြည်နယ်၏ဦးခေါင်းနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်တစ်ဦးချင်းစီကက်ဘိနက်တစ်ဦးဦးခေါင်းရှိသည်ဘယ်မှာဝန်ကြီးများစူပါ DIRCAB ပါဝင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဝန်ကြီးချုပ် Sylvestre Ilunga Ilunkamba အားလုံးဆက်လက်ပြည်နယ်၏ခေါင်းပေါ်ကခန့်အပ်ခံရဖို့လာမယ့်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ကနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေကတည်းကညှိနှိုင်းစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာချုပ်ဖို့ဝန်ကြီးမဖော်ပြထားခြင်းအစိုးရကများ၏တည်ဆောက်ပုံများ cache ကနေကိုယ်စားလှယ်များကညှိနှိုင်းအဖြစ်ယုံကြည်နှင့် FCC သည်သမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်သမ္မတမှဝန်ကြီးများ, ဝန်ကြီးများ, ကိုယ်စားလှယ်, ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့်ဝန်ကြီးများပါဝင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် ဝန်ကြီး "။
အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ, အနာဂတျခေါငျးစဉျဆန့်ကျင်တုန့်ပြန် about: "ဒီ DRC နှင့်ရဝမ်ဒါသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုစုပေါင်းပြီးချင်"။ သူ DRC နှင့်ရဝမ်ဒါ, သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏အထံတော်၌နှစ်နိုင်ငံရဲ့ကနျြးမာရေးဝန်ကြီးများကတဆင့်အင်္ဂါနေ့က e, ပူးတွဲအစည်းအဝေးစုသိမ်းလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ ဤသည်သားကောင်များတောင်းဆိုဆက်လက်သောအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ, ကအန္တရာယ်စိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းငှါ, သတင်းစာနှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပတ်ယာယီကနျြးမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဦးခေါင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သူန်ကြီး Oly Ilunda Pierre ၏ Kangudia ၏နှုတ်ထွက်စာကိုအပြီး, လှုပ်ရှားမှုများကိုသြဒိနိတ်ပေးသောဒေါက်တာ Jean-Jacques Muyembe join ဖို့တနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ 05 2019 အပေါ်ဂိုမာရောက်ရှိလာခဲ့ ဤရောဂါပပျောက်ရေးမှအီဘိုလာရောဂါပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖို့တုန့်ပြန်, သတင်းစာကိုလည်းပြန်ပြောပြသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်: "အီဘိုလာရောဂါရဲ့ပထမဦးဆုံးအမှု Beni ပိုင်နက်အစီရင်ခံခဲ့သည်ကတည်းကဒီပြီးသားတစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့သည်သတိပြုပါ။ ယနေ့မြောက်ကီဗူ၏ပြည်နယ်မှာထက်ပို 1.000 သေဆုံးမှု "ရှိပါတယ်။ ဒါကကိန်းဂဏန်း, အလားအလာနှင့်အညီ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစီရင်ခံခံရဖို့ဆက်လက်အသစ်များကိုဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်ရန်မျှော်လင့်နေသည်။
ဖိထားပါအာဖရိကဘောလုံးသမားတနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ 05 2019 - ဗီဒီယို